Volusion, Ecommerce software yekugadzira zvitoro zvepamhepo | ECommerce nhau
Volusion, Ecommerce software yekugadzira zvitoro zvepamhepo
Volusion Icho chimwe chei inonyanya kufarirwa e-commerce mapuratifomu paInternet, nekuda kwekuti inokutendera kuti ugadzire zvitoro zvepamhepo uye zvakare inosanganisira akasiyana maturusi uye mashandisirwo, anoitirwa kutengesa zvigadzirwa, kunyangwe usina ruzivo rwemberi.
Ndicho Ecommerce mhinduro yakafanana nemamwe akawanda e-commerce mapuratifomu, Inokutendera iwe kuti ugadzire zvitoro zvepamhepo uye tarisa pane zvekutengesa, pasina kukanganiswa nekurapwa kwemaseva kana kusatombonetseka nezve kubatanidza ngoro yekutengera kune yako Ecommerce webhusaiti.
Inofungidzirwa kuti anopfuura makumi mana emakumi ezvitoro zvepamhepo zvakagadzirwa ne software iyi, zvichibvumira vashandisi ku Ecommerce mabhizinesi varidzi, tengesa anodarika mamirioni gumi nemashanu emadhora, chete mumakore gumi apfuura.
Volusion ine masimba ecommerce maturusi, iyo inokutendera iwe kuti ugadzire nyore chitoro chepamhepo. Zvese izvi zvishandiso zvinosanganisirwa muzvirongwa zvako zvepamwedzi, asi kukwirira chirongwa chaunosarudza, maturusi mazhinji aunowana.
Mazana ezvigadzirwa anogona kugadziridzwa, gamuchira tsigira maawa makumi maviri nemana pazuva, mazuva manomwe pavhiki, matemplate ekuwana, zvishandiso zvemasocial network, optimized mobile commerce, kune mamwe maturusi e otomatiki mutero. Iyo software inopawo chaiyo-nguva rutsigiro kuitira kuti rubatsiro runogona kukumbirwa pazvinenge zvichidikanwa.
Kunyangwe zvirinani, Volusion haibhadhare chero chinhu pakutengesa izvo zvinogadzirwa, nenzira yekuti Ecommerce yako ichengetedze mabhenefiti ayo. Ehezve, zvicharamba zvichidikanwa kubhadhara mari yekugadzirisa, asi muchokwadi Volusion haibhadharise chero chinhu.
Este Ecommerce software yekugadzira online chitoro Izvo zvakanaka kune avo vari kufunga zvekuvaka ecommerce webhusaiti, asi vasina nguva kana hunyanzvi hunyanzvi hwekushanda nekodhi kana kusanganisa maturusi. Iyi mhinduro yeEcommerce iyo inokubatsira iwe kuwedzera zvigadzirwa, kusimudzira bhizinesi rako, kugonesa vatengi kubhadharisa, kugadzirisa zvinyorwa zvako uye chakanakisa chinhu ndechekuti inogona kuitiswa mune chero mhando bhizinesi, kusanganisira zvipfeko, hutano uye zvigadzirwa zvekunaka, zvemagetsi., zvishongo, mota, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » ECommerce kudzidziswa » Volusion, Ecommerce software yekugadzira zvitoro zvepamhepo
Zvinoshamisa kushanyira ino webhusaiti uye kuverenga maonero evamwe vese nezve ichi chidimbu chekunyora, ini ndichidawo kuwana
Pindura kutsvaga nhau
5 zvinhu zvinoshamisa zvaunogona kuita neWooCommerce
Cart66; yekutengera yeEcommerce WordPress